Andranomadio – Toamasina: mpivady mpangalatra omby | NewsMada
Andranomadio – Toamasina: mpivady mpangalatra omby
Omby iray no very tao ambalan’ny fianakaviana iray, etsy Andranomadio-Toamasina. Sendra nivoaka nijery ny ombiny ny tompon-trano, omaly marina, no nahatsikaritra fa telo sisa ny tao am-bala, raha tokony ho efatra . Nanara-dia, avy hatrany, izy ary nahita faritra feno ra, avy namonoana omby.
Nanomboka teo indray, diana kodiarana moto no nisy. Narahina koa io dian-kodiarana io ary niafarana tamina tokantrano iray. Rehefa hitan’ny tompon’ omby izany ary azony antoka fa tao amin’ity tokantrano ity tokoa ny nitondran’ny olona ny fatin’ombiny, niantso fokonolona izy.
Taorian’ izay, vorilanona tokoa ny vahoaka, niaraka tamin’ny hazo sy kibay, midika fa hanaovana fitsaram-bahoaka ilay nahina ho naka ny omby. Niantsoantso ny tao amin’ilay trano ny fokonolona, mba hivoaka, saingy tsy nisy nivoaka. Marihina fa izany Tsaramanana Wencaslas Fabrice, 27 taona, sy i Christaline, 18 taona, izany ny tao amin’ilay trano.
Taorian’ izay, lasa nanangona kodiarana fiara simba ny hakamaroan’ ny fokonolona, nanapa-kevitra fa hodorana ao an-trano izy ireo, raha tsy mivoaka.
Nisy ihany anefa ny tsara sitra-po, niantso ny polisin’ny Fip etsy Ankirihiry, notarihin’ny kaomisera, Francois Lapely, lefitry ny komandan’ny Fip. Tonga ara-potoana izy ireo ka voasoroka ny fitsaram-bahoaka sy ny fikasana handoro ilay tranon’olona.
Nisava ilay trano, avy hatrany, ny Fip ary hita tao izy mivady, niafina niaraka tamin’ny henan’omby sy tsinainy ary ilay moto nitaterany azy. Raha ny fanazavana tamin’ny fanadihadiana sava ranon’ando, vonoina amin’ny toeran-kafa, avy eo, taterina amin’ny moto raha henon’ omby halatra. Taorian’ny fahatrarana azy mivady kosa, nilaza anaran’olona hafa, mpiray tsikombakomba aminy, ireto mpivady ireto.
halatra ataony izy mivady,
Azo lazaina ho mpamerin-keloka i Tsaramanana Wencaslas Fabrice, efa nigadra indroa. Halatr’omby ny voalaza fa tena fanaony. Tsikaritra fa anisan’ny mora indrindra ny vidin’ny henan’omby ao amin’ny tsenan’Ankirihiry, Ambolomadinika, Tanambao fahadimy ary Valpinson, raha oharina amin’ny tsena hafa, eto Toamasina,